FBI-da Mareykanka oo Xabsiga dhigtay Wiil Soomaali oo Daacish ku biiray | HalQaran.com
FBI-da Mareykanka oo Xabsiga dhigtay Wiil Soomaali oo Daacish ku biiray
USA (Halqaran.com) – Ciidanka FBI-da Mareykanka ayaa xabsiga dhigay laba wiil oo Somali ah kuwaasi oo qorsheynaayay inay ku biiraan Daacish.
Labadan wiil Somalida ah ayaa falka Mareykanka waxa ay ku joogeen arrimo Qaxootinimo, waxaana la qabtay iyaga oo doonaya inay u dhoofaan dalka Masar, halkaasina kaga sii gudbaan goobaha Daacish ay joogaan.
FBI-da Mareykanka ayaa Isniintii shaacisay xarigga wiilashan oo muddo bilo ah qorsheynayay safarkooda, waxaana FBIda xogtan siiyay qof si qarsoodi ah ula shaqeeya Hay’adda FBI-da oo ay la wadaageen dhaq dhaqaaqa Saafrkooda sida ay sheegtay Maxkamadda loo gudbiyay.
Labadan ee la qabtay xilli ay doonayeen inay u safraan dalka Masar kadibna Daacish ay ku biiraan ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Axmed Mahad Maxamed oo 21 jir ah iyo Cabdi Yamani Xuseen, kuwaas oo uu midka hore Green Car ku joogo dalka Mareykanka halka Ninka dambe qaxootinimo wali ku joogay dalka Mareykanka.
Qorshaha raggaan waxaa la sheegay inuu ahaay inay noqdaan rag argagixiso caan ah islamarkaana dadka dila & kuwa dadka qoorta ka gooya inay noqdaan.
Sida Xogtooda loo helay ayaa waxa ay tahay in Bishii sideedaad ee sanadkii la soo dhaafay qof ay saaxiib yihiin Internetka ay uga sheegeen qorshaha ay damacsan yihiin, balse qof kaasi ayaa noqday Sirdoon FBI-da la shaqeeya.